‘मासु आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ मा बैङ्कको रू. सवा २ अर्ब लगानी – newsagro.com
‘मासु आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ मा बैङ्कको रू. सवा २ अर्ब लगानी
April 2, 2014 April 4, 2014 NewsAgro0Comments
काठमाडौं, १९ चैत / नेपाललाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यअनुरूप साना किसान बैङ्कले ‘मासु उत्पादन कार्यक्रम’मा २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।
नेपालमा हुँदै आएको मासु आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने तथा स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचअनुरूप मासु उत्पादन कार्यक्रममा सो लगानी गरिएको बैङ्कले बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार आयोजित कार्यक्रममा बैङ्कका कर्मचारीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक करीब ७ सयओटा राँगाको खपत हुने गरेको छ । त्यसैगरी, ९ सय ८० देखि १ हजार १ सयसम्म खसी/बोका विक्री हुँदै आएको उनको भनाइ छ । पशुसेवा विभागले जानकारी दिएअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल २ लाख ९५ हजार ४ सय ८६ मेट्रिकटन मासु उत्पादन भएको थियो ।
छलफलमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले पशुबीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत छूट दिएको बताए । हाल नेपालमा ७२ लाख ४५ हजार गाईवस्तु, ५१ लाख ३३ हजार भैंसी, ९५ लाख १२ हजार बाख्रा, ८ लाख ७ हजार भेडा, ११ लाख ३७ हजार बङ्गुर तथा सुङ्गुर, ४ करोड ५१ लाख ७१ कुखुरा र ३ लाख ७७ हजार हाँस, घरपालुवा जनावर र पशुपक्षी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
← सुर्खेतबाट तरकारीका बीउ बङ्गलादेश निर्यातको तयारी
प्याज तरकारी मात्र होइन, औखती पनि हो →